crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> October | 2019 | HimiloNetwork
La kulan – Samafalaha bixiya Deymaha lagu leeyahay Ardayda Saboolka ah!
Himilo October 20, 2019	Leave a comment 253 Views
FLORIDA (HN) — Nin ku nool gobalka Florida ayaa go’aansaday inuu sameeyo is-beddel – isaga oo bixinaya dhammaanba deymaha hariimada ‘qadada’ ardayda ay ku cunaan dugsiyada dadweynaha. Waxay ku bilaabatay ugu horreynba qoraal lasoo dhigay barta facebook. Qoraalka ayaa lagu ogeysiinayay samafalayaasha inay jirto lacag dhan 1,000$ ku dhawaad oo loo amaahday qadada ardaydu ku cunaan fasallada siiba kuwa aan ...
Gabar – Is-qurxis Qaliin oo ay gashay awgeed – labadeeda indhood isku qaban la’!
Himilo October 20, 2019	Leave a comment 416 Views
MUQDISHO (HN) — Haweeney Shiinees ah oo adduun dhan 13,000 yuan ‘una dhiganta $1,850′ ku bixisay inay marto qaliinka baararka indhaha loogu sameynayo ayaa hadda awoodi la’ inay labadeeda indhood isku qabato – xittaa marka ay jiifsaneyso. Nuuca qaliinkan ayaa ah midka loogu codsiga badan yahay guud ahaan Shiinaha, Japan iyo Kuuriya. Waxaana loo tix-geliyaa mid soo jiidasho leh. Laakiin ...
Himilo October 20, 2019	Leave a comment 312 Views
BEIJING (HN) — Shaqaalaha Beerta lagu xanaaneeyo noolaha oo ku taalla Shiinaha ayaa la kulmay canbaaareyn xooggan kaddib markii Diindiin ay dushiisa kolay yar kula dhejiyeen koolo adag si dalxiisayaasha ay ugu ridaan shilimaadka ay hayaan. Muuqaal laga soo qaaday Diinka kaas oo ku baahay baraha bulshada ayaa keensaday dhaleeceyn ay hormuud ka yihiin ururrada u dooda xuquuqda xayawaannada iyo ...
Himilo October 20, 2019	Leave a comment 324 Views
BEIJING (HN) — Warbaahinta Shiinaha ayaa hadal-heysa sheekada gabar 7 jir ah oo calaamadaha qaangaarnimada ay kasoo baxeen – kaddib markii sida la sheegay inay si joogto ah ugu seexan jirtay nalka oo u daaran habeen walba. Dandan, oo 7 jir ah, waxaa aad ula yaabay hooyadeed oo dareentay inay gabadheedu aad uga dheeraaneyso gabdhaha kale muddo sannad gudihiisa ah. ...
Himilo October 20, 2019	Leave a comment 247 Views
MUQDISHO (HN) — 61 jir Japan u dhashay ayaa boolisku xiray dhawaan kaddib markii lagu helay inuu xaday 169 fadhiyada baaskiillada ah – si uu markiisa uga aarguto kuwii kiisa ka xaday sannad kahor. Akio Hatori, oo ku nool Ota Ward waxay kaamirooyinku qabanayeen dhawaanahan isaga oo fuqsanaya fadhiyada baaskiillada. Wuxuuna hadda kasoo muuqday maxkamadda horteeda. Warka sheekadiisa ayaa soo ...
Himilo October 19, 2019	Leave a comment 367 Views
MUQDISHO (HN) — Meel dheer marka laga jeedaaliyo, muuqaalkiisu ma ahan mid kugu abuuraya niyad-jab. Balse waa in yar kaddib kolka aad kusoo dhawaato goorta aad dareemeyso wax inay ka dhiman yihiin hufnaanta faya-dhowrkiisa. “Maalin walba waa sidan,” ayuu yiri Xuubeey oo deris la ah mid kamid ah isbitaallada ugu waaweyn ee dhaca bartamaha Muqdisho. “Haddii uu roobku curtana kumaba ...
Himilo October 19, 2019	Leave a comment 221 Views
BRUSSELS (HN) — Si daaha looga rogo hab cusub oo biyaha dib loogu isticmaali karo, maqaayad ku taalla Kuurne, dalka Biljamka ayaa cabitaan nadiif ah kasoo saaraysa biyaha loo adeegsado fara-xalka iyo suuliga. Biyaha toddobaadkii dhawaa oo dhan loogu adeegay macmiisha maqaayadda ma laheyn ur iyo dhadhan ka duwan kuwii caadiga ahaa ee horay loogu adeegi jiray. Waana wax adag ...
Muslim toddobaadle kabo cusub ugu qeybiya Darbi-jiifta.
Himilo October 18, 2019	Leave a comment 255 Views
LONDON (HN) — Moosa Nsubuga, oo ah dhawaan Muslime ku nool Koofurta London, wuxuu beddelayaa dhaqanka ku dhisan ku deeqista alaabaha duuga ah, wuxuuna hadda darbi-jiifta ugu deeqaa kobo cusub oo ay xirtaan. ”Caqiidadayda Islaamku waa tan iga dhigtay inaan noqdo deeqsi dar Ilaahay wax u baxsada,” ayuu yiri Moosa. ”Waxaan sidoo kale ku dadaalay inay wadajir igala qeyb qaataan ...
Tababbaraha Elman oo qaatay diinta Islaamka.
Himilo October 18, 2019	Leave a comment 262 Views
MUQDISHO (HN) — Tababbaraha Kooxda Elman, Mayanja Roberio wuxuu ugu danbeyntii qaatay Diinta Islaamka kahor intaan la gelin salaadda Jimcaha ee Masjidka Saxaaba ee Muqdisho. Mayanja oo ah hadda kaddib doortay in loogu yeero Ciise ayaa dhalasho ahaan kasoo jeeda dalka Uganda. Shiikh Cabdilxayi Shiikh Adan oo ah Imamka Masjidka Saxaaba ayaa u qabtay Shahaadada. Boqollaal jamaacada Masjidka kamid ah ...
Himilo October 13, 2019	Leave a comment 435 Views
MANILA (HN) — Maamulka Philippines ayaa la dagaalamaya labo dhibaato oo kamid ah khataraha ugu weyn ee ka jira tuulada Bayanan ee kala ah gaajada iyo wasakhda balaastikada ah. Tuulada dhacda Philippines ayaa dadaal ugu jirta sidii loo yareyn lahaa qashinka balaastikada iyadoo dadweynaha bariis looga beddalanayo qashinka ay ku wareejiyaan dowladda. Qof kasta oo ku nool tuulada oo keena ...